TCDD မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများ - RayHaber
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီTCDD Express ကိုရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများ
28 / 08 / 2019 Levent Ozen 06 တူရကီ, 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အစာရှောင်ခြင်းရထား, တူရကီ 2
တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏သမ္မတနိုင်ငံ (TCDD) ပို့ဆောင်ရေး Inc ၏ TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှု၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်လိုင်းများအတွက် အဆိုပါအမြင့်မြန်နှုန်းရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများအားဖြင့် operated နောက်ဆုံးရေးသားချိန်။
ယခုအစ္စတန်ဘူလ်မြန်နှုန်းမြင့်တူရကီအတွက်Eskişehirလေ့ကျင့် - တူရကီနှင့် Konya ခရီးသွားရောက်ရှိလာခဲ့အနေနဲ့အလွန်အမင်းအစာရှောင်လမ်းကြောင်းဖြစ်လာသည်။ အစာရှောင်ခြင်းရထား 200 320 ကီလိုမီတာကီလိုမီတာနှင့်အတူပျမ်းမျှအတွက်ဦးဆောင်ယူပါ။ တူရကီကနေအစ္စတန်ဘူလ်ယခု 4.5 နာရီကြာတဲ့ကာလအတွင်းရောက်ရှိပါစေ။ အလွန်အဆင်ပြေနေကြသည်ကိုသင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အဆင်ပြေမြန်ဆန်စွာရထားအားဖြင့်သွားလာနိုင်ပါတယ်။ အောက်ပါစျေးနှုန်းနှင့်အချိန်ပေးထားသောစံဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျအခွန်လျှော့ချခြင်းနှင့်ပရိုမိုးရှင်းများအတွက် site ကို tcdd.gov.t မှသတင်းအချက်အလက်ရရှိနိုင်သည်။
ဖော်ပြရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများ 2019 လက်ရှိစျေးနှုန်းစာရင်း (YHT)
တူရကီအစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားပြရန်ငွေမည်မျှ? .. TCDD နေ့စဉ်လက်မှတ်စျေးနှုန်းများ 29 / 08 / 2019 တူရကီအစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထား Show ကိုဘယ်လောက်ပိုက်ဆံ .. TCDD နေ့စဉ်လက်မှတ်စျေးနှုန်းများ:? အချင်းချင်းမြန်နှုန်းမြင့်ရထားကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာသို့ငြိမ်ဝပ်နှင့်အတူသွားလာရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်နှင့်ပိုပြီးပျော်စရာဖြစ်လာသည်။ ပို့ဆောင်ရေး TCDD ဒီလယ်ပြင်၌ရှိသမျှသောတီထွင်မှုများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေနဲ့သငျသညျစနစ်သို့ပေါင်းစည်းဖို့အတှကျ insatiable ခရီးသွားခွင့်အလမ်းများအမြန်ဆုံးလမ်းပေးထားပါတယ်။ တူရကီအစ္စတန်ဘူလ်မြန်နှုန်းမြင့်ရထား, တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်နှင့်အစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီအကြားအပြန်အလှန်6နေ့စဉ်ပျံသန်းမှု operate ။ အသီးသီးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်415 မိနစ်နာရီအထိ Pendik ၎င်းတို့၏မှတ်တိုင်များရပ်တန့်ခြင်းဖြင့်တူရကီ Sincan, Sincan, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, Gebze နှင့် Izmit ထံမှလေ့။ Ankara- ...
တူရကီပြည်နယ်မီးရထားပို့ဆောင်ရေး Express ကိုရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများခဲ့ကြသည်ကိုအပ်ဒိတ်လုပ် 29 / 08 / 2019 တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏သမ္မတနိုင်ငံ (TCDD) ပို့ဆောင်ရေး Inc ၏ TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှု၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်လိုင်းများအတွက် အဆိုပါအမြင့်မြန်နှုန်းရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများကိုဆက်သွယ်မယ့်ကြီးမြတ်အတိုင်းအတာအထိကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်အချင်းချင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသုံးပြုပုံကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများ, updated ခရီးသည်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုများ။ ယခုအစ္စတန်ဘူလ်မြန်နှုန်းမြင့်တူရကီအတွက်Eskişehirလေ့ကျင့် - တူရကီနှင့် Konya ခရီးသွားရောက်ရှိလာခဲ့အနေနဲ့အလွန်အမင်းအစာရှောင်လမ်းကြောင်းဖြစ်လာသည်။ အစာရှောင်ခြင်းရထား 200 320 ကီလိုမီတာကီလိုမီတာနှင့်အတူပျမ်းမျှအတွက်ဦးဆောင်ယူပါ။ တူရကီကနေအစ္စတန်ဘူလ်ယခု 4.5 နာရီကြာတဲ့ကာလအတွင်းရောက်ရှိပါစေ။ အလွန်အဆင်ပြေနေကြသည်ကိုသင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အဆင်ပြေမြန်ဆန်စွာရထားအားဖြင့်သွားလာနိုင်ပါတယ်။ အောက်ပါစျေးနှုန်းနှင့်အချိန်ပေးထားသောစံဖြစ်ကြသည်။ ...
တူရကီပြည်နယ်မီးရထားရထားကိုပုံမှန်အတိုင်းရာရာခိုင်နှုန်း ZAMLANDI 18 / 01 / 2016 တူရကီပြည်နယ်မီးရထားရထားကိုပုံမှန်အတိုင်းရာရာခိုင်နှုန်း ZAMLANDI: သစ်ကိုတစ်နှစ်တူရကီတူရကီရဲ့လုပ်အချိန်သမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံတော်မီးရထားအများအပြားမြို့ကြီးများအားမိမိမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးရထားနှင့်အတူ။ TCDD အချို့သောပြည်နယ်များအတွက်လက်မှတ်စျေးနှုန်းများ 100% ထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။ အချို့သောမြို့ကြီးများရှိမီးရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများကိုမည်မျှကြီးပြင်းခဲ့သလဲ နယူးလက်မှတ်စျေးနှုန်းများ? အချိန်သတင်းများ, သစ်ကိုအကောက်အခွန်၏တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) TCDD geldi.xnumx ဇန်နဝါရီလ 15 စတင်နေ့စွဲများစွာကိုပြည်နယ်များအတွက်တူရကီရဲ့ရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများအားဖြင့်ကြီးပြင်းသမ္မတနိုင်ငံထံမှဤအချိန်။ ရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများကိုအချို့သောပြည်နယ်များအတွက် 2016 ရာခိုင်နှုန်းကိုရောက်ရှိထမြောက်တော်မူ။ အချို့သောပြည်နယ်များအတွက်အခွန် 100 ထမြောက်တော်မူစဉ် 100 ရာခိုင်နှုန်းကယခင်အခွန်တိုးမြှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ...
အီဘရာဟင် alparslan ဟုသူကဆိုသည်:
ငွေမည်မျှငါ Kirikkale တူရကီလက်မှတ်ကောင်တာအမျိုးမျိုးတို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာဆီသို့ရောက် လာ. , သင်ယူဖို့လိုပါကသင်၏မိုက်မဲမေးခွန်းကိုအဖြေပေးခံလေပြီတကား
Levent Elmastaş ဟုသူကဆိုသည်:
အကြမ်းဖျင်း: Eastern Express 11TL
Konya Konya, Eskisehir မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများ
တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများ 70 80 TL